Usapho lakwa Wanga kwilali yaku Qombolo ku Centane lucela iminikelo kulandela isiganeko sokutshelwa ngumzi – Ntu News
Inqaku libhalwe ngu Sesona Mqheliswa
Oku kuza emva kokuba usapho lakwa Wanga kwilali yaku Qombolo ku Centane lwavelelwa sisiganeko sokutshelwa likhaya labo kwinyanga yeDwarha ku 2021 ezinzulwini zobusuku,​ ukanti unobangela wokugqabhuka kwalo mlilo awukaziwa.
Othethela usapho uSiyamamkela Wanga uthi, esisehlo senzeka ezinzulwini zobusuku ukanti akuzange kubelula ukuba kufike aboncedo lokucima umlilo ntoleyo yakhokhelela ukuba kutshe de kungqongqe yonke into eyayingaphakathi kuquka iimpahla kunye nokutya.
“eyona nto ibuhlungu yeyokuba kukhona abantwana besikolo ababini abatshelwa ziimpahla ze bashiyeka nezo ababezinxibile ngexesha lesiganeko”, utshilo uSiyamamkela.
uSiyamamkela nongunyana wosapho wongeze ngelithi, ngemini yesisehlo kwakungekho mntu phakathi endlini.
Olusapho lufihla intloko kwigali elincinci ebelingasetyenziswa, uMama wakhe, uTandiwe Wanga (40), utatomkhulu (69) kunye nabantwana abathathu abakwiminyaka engama 4-13 ubudala. Olusapho lubongoze nabani na onokunceda ukuba​ babuyisele ubomi babo kwisimo esibhetele ngokuthi banikele nangantoni na enokubanceda ukujongana nesisimo.
Abantu abanqwenela ukufaka isandla bangathumela kwi Bhanka yase Capitec, Acc holder: Mr. S Wanga, Acc no: 1567374989 okanye basebenzise le nombolo: 0739347402ngenkcukacha ezithe vetshe bangaqhagamshelana no Tandiwe Wanga ku 0638132483/0739347402.
← Palm TV launches unique shopping digital platform
VOX-POPS – Opinions of Nelson Mandela Bay residents during the Return to Play Vaccination Campaign →